हवाई जहाज चढ्नासाथ मोबाइल किन फ्लाइट मोडमा राखिन्छ ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकहवाई जहाज चढ्नासाथ मोबाइल किन फ्लाइट मोडमा राखिन्छ ?
काठमाडौं । हवाई जहाजमा चढ्नासाथ मोबाइललाई एयरप्लेन वा फ्लाइट मोडमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर के तपाईंलाई थाहा छ, यस्तो बेला मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नु किन अनिवार्य हुन्छ ? जब प्लेन हावामा टेक अफ लिन्छ, तब पाइलटलाई तल जमिनमा रहेका टावरसँग सञ्चार गर्न सिग्नल प्राप्त हुन्छ ।
यसबाट पाइलटले अगाडिको मौसम कस्तो छ, कुनै अर्को फ्लाइट गइरहेको त छैन यस्ता निकै महत्वपूर्ण सूचना पाइलटको कानसम्म पुग्न पाउँदैनन् । प्लेन चलाउने पाइलटको मात्र होइन, फ्लाइट सुरक्षित र सही दिशामा उचित रुपमा उड्नका लागि ग्राउन्ड स्टेसनमा हुने कन्ट्रोल रुमको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।यी कारणले गर्दा फोनमा एयरप्लेन मोड राखिएको हुन्छ र उडानका दौरान त्यसलाई अन गर्नुपर्ने नियम बनाइएको हो ।